Ipeyinti yezintso-Inkqubo yokupeyinta ye-iPhone eyenzelwe ngokukodwa uBantwana | Plum emangalisayo
Ipeyinti yomntwana-Inkqubo yokupeyinta i-iPhone eyenzelwe ngokukodwa abantwana
Ipeyinti ye-Kid-I-App yokupeyinta i-iPhone eyilelwe ngokukodwa aBantwana-Iyafumaneka ngeXesha eliMiselweyo nge- $ 0.99
UMHLA: ngoJanuwari 11, 2010
Kumnandi kakhulu, kunobunkunkqele kodwa kulula ukusebenzisa umzobo womnwe / inkqubo yokupeyinta yabantwana bayo yonke iminyaka kunye nabantu abadala. Le yi-iPhone okanye i-iPod touch app ikuvumela ukuba usebenzise umnwe wakho ukupeyinta kwaye uzobe, usebenzisa iibrashi ezahlukeneyo kunye neepensile zokubiza iifayile. Ipeyinti yezintso inezixhobo zokwenza isikwere esifanelekileyo, izangqa, imigca kunye izitampu. Sebenzisa imifanekiso yakho njengemvelaphi ukuzoba okanye ukupeyinta okanye ukuqala ukusuka ekuqaleni. Isinxibelelanisi silula kangangokuba umntu omdala angayisebenzisa kwangoko.
Khuphela i-Kid Paint apha (iphinda ibuyele kwiVenkile yokuThengisa i-iTunes kwi-iTunes): http: //itunes.apple.com/us/app/kid-paint/id349038965? Mt = 8
- Kulula ukusebenzisa ujongano lwezandla zetakane elincinci kunye nabantu abadala abakhulu. Isixhobo seSitampu- Isixhobo seSududge- Zoba izangqa, izikwere kunye nemigca ethe tye yabo bonke ubungakanani.
Abantwana bethu bayayithanda le nkqubo. Iyabonwabisa yeeyure ngelixa uqhuba kwaye ibabanceda ukuba baphuhlise iso labo / izandla zabo kunye nobuchule bobugcisa.
Ipeyinti yezintso yinto elula kodwa elula ukusebenzisa inkqubo yokupeyinta iminwe yabantwana bayo yonke iminyaka kunye nabantu abadala. Le yi-iPhone okanye i-iPod touch app ikuvumela ukuba usebenzise umnwe wakho ukupeyinta kwaye uzobe, usebenzisa iibrashi ezahlukeneyo kunye neepensile ze-calligraphy. Ipeyinti yezintso inezixhobo zokwenza isikwere esifanelekileyo, izangqa kunye nemigca. Sebenzisa imifanekiso yakho njengemvelaphi ukuzoba okanye ukupeyinta okanye ukuqala ukusuka ekuqaleni. Isinxibelelanisi kulula kakhulu ukuba umntu omdala angayisebenzisa kwangoko.
IPlum emangalisayo Software esekwe yinkampani yabucala ebekelwe i-iPhone, iMac, iiWindows kunye nezicelo zeselula. IPlum emangalisayo ngumnikezeli wehlabathi jikelele wezicelo zeselfowuni kunye needesktop ukusukela ngo-1995.
kunye neeNkqubo zeMac
Ngolwazi olongezelelweyo, nceda undwendwele
Ngolwazi oluthe kratya kunye nekopi yokujonga kwakhona isoftware yethu, nceda unxibelelane nathi.